Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » Nahazo ny lokan'ny Best Adrian Gold Adrian tany Jamaika i Jamaika
Ny fifantohana tamin'ny taona 2020 HSMAI Adrian Awards dia tamin'ny fampiharana fampiasa tsara indrindra, fanavaozana ary fiaraha-monina, mampiseho ny ezaka miavaka indrindra amin'ny indostria
Ny loka Adrian dia misolo tena ny fifaninanana marketing lehibe indrindra sy malaza indrindra manerantany
Mankalaza ny valin'ny krizy feno nataon'i Jamaika io loka io
Ny fifaninanana dia fampisehoana sy mari-pahaizana momba ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny trano fandraisam-bahiny sy marketing ary haino aman-jery
The Birao mpizahatany ao Jamaika (JTB) dia neken'ny Association Association Sales and Marketing Marketing Iraisam-pirenena (HSMAI) miaraka amin'ny mari-pankasitrahana tsara indrindra ho an'ny fifandraisana amin'ny besinimaro amin'ny Crisis Communication / Management. Ny fidiran'ny JTB, mitondra ny lohateny hoe "Fifandraisana amin'ny alàlan'ny krizy: maodely iray ho an'ny fitarihana fizahan-tany," dia nifantoka tamin'ny valinteny feno sy feno fiheverana ny areti-mandringana, miaraka amin'ny fanamafisana ny varotra vaovao sy ny fifandraisana iraisam-pirenena. Ny fifantohana amin'ny loka HSMAI Adrian ho an'ny taona 2020 dia ny fampiharana tsara indrindra, ny fanavaozana ary ny fiarahamonina, mampiseho ny ezaka miavaka indrindra ataon'ny indostria izay hitarika ny fandraisana vahiny sy ny fizahantany fizahan-tany.
"Voninahitra iray ny manana ny ezaka ara-barotra sy ny serasera hoderain'ny fikambanana iraisam-pirenena tamin'ny fotoana niasantsika mafy nanehoana ny fitarihan'ny mpizahatany tena manerantany," hoy ny talen'ny fizahan-tany an'i Donovan White Jamaica. "Ny fomba mailaka sy stratejika amin'ny marketing dia hijanona ho lohalaharana ho an'ny JTB rehefa manohy miasa mankany amin'ny fanarenana matanjaka ho an'ny indostrian'ny fizahantany izahay."
Ny loka dia mankalaza ny valin'ny krizy feno sy ny fahaizan'i Jamaika mampiditra mpitsangatsangana ao an-trano noho ny fanidiana ny sisintany amin'ny fiandohan'ny areti-mandringana. Ny ivon'ny paikadin'ny JTB dia ny laharam-pahamehan'ny GEN-C, taranaka teraka tamin'ny traikefa niainan'ny COVID-19 fanakatonana. Natolotry ny minisitry ny fizahantany any Jamaika Hon. Edmund Bartlett, ity fametrahana eran-tany an'ny vondrona mpitsangatsangana vaovao ity no fototry ny sehatra fitarihana eritreritra iraisam-pirenena. Ity loka ity dia nankalaza ihany koa ny ezaka miavaka nataon'i Jamaika hananganana fifandraisana ara-pientanam-po, saika, miaraka amin'ny kolotsaina Jamaikana ho an'ny olona ao an-trano. Ny andian-tsarimihetsika Escape to Jamaica niomerika dia nanasongadina ny nahandro, ny fahasalamana ary ny mozika tamin'ny alàlan'ny fampisehoana demonia, kilasy fanatanjahan-tena ary fivoriana DJ isan-kerinandro. Amin'ny ankapobeny, ny fanentanana dia nahitana fahombiazana miavaka tamin'ny fahatsapan'ny haino aman-jery an'arivony tapitrisa.
Ny loka Adrian, natolotry ny Hospitality Sales & Marketing Association International (HSMAI), no misolo tena ny fifaninanana fivarotana dia lehibe indrindra sy malaza indrindra manerantany. Nampiantranoina isan-taona, ny fifaninanana dia fampisehoana hatrany sy fari-pitsipika fanao tsara indrindra amin'ny hotely sy marketing ary haino aman-jery mifandraika amin'ny dia.